Ikotishi elithokomele ngasolwandle - I-Airbnb
Ikotishi elithokomele ngasolwandle
Vestmanna, Streymoy, i-Faroe Islands
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ena
Ungathola indlwana yethu ethokomele egcekeni lethu elingemuva nje kolwandle. Lapha ungaphumula futhi ujabulele indawo enokuthula nendawo enhle. Indlwana ilungele abantu abashadile noma ababili. Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo, kukhona i-café/ibha, isikhungo sezokuvakasha, i-sagamuseum, isikhumbuzo, indawo yokudlela, ukubuka izinyoni, uhambo lokubuka ulwandle kanye nesitolo sokudla. Endlini kamakhelwane, kunekhefi elidala langempela, lapho ungathenga khona imisebenzi yezandla ye-Faroese.
500 m ukuxhunywa kwebhasi ku-Tórshavn.
I- hayhouse endala "Hoyggjhúsið" yakhiwa kabusha ngo-2018 futhi inendlu yokugezela encane eneshawa nendlu yangasese. Indawo yokulala ise-loft, ekhanyayo njengemibhede elala abantu ababili noma emibili. Ikhishi elincane elinazo zonke izindawo, kodwa alikho i-freezer. Kunezinongo eziyisisekelo, njengosawoti kanye nopelepele. Futhi i-thé nekhofi elisheshayo liyatholakala.
Ungahlala phansi futhi ujabulele i-viev kusofa omncane noma etafuleni. Kukhona i-Wi-fi yamahhala kanye ne-TV ye-chromecast.
Indawo engumakhelwane inokuthula nokuzola kakhulu. Isonto ngakolunye uhlangothi nekhofi elidala ngakolunye uhlangothi. Ekhofi, ungajabulela inkomishi yekhofi futhi ubuke esitolo, ophethwe abantu bendawo. Mhlawumbe uzothola umusi omuhle, umdwebo noma ezinye izinto ezenziwe ngezandla.
Siphila endaweni eseduze futhi sizokweluleka ngenjabulo ngawo wonke amathuba okubuka indawo kanye neminye imininingwane edingekayo, ngakho-ke unganqikazi uku ngqongqoza emnyango wethu noma usibhalele, uma singekho ekhaya.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vestmanna namaphethelo